Sh. Shaakir oo sheegay in la qabtay Raggii Shacabka ku dilay duleedka Dhuusamareeb - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Sh. Shaakir oo sheegay in la qabtay Raggii Shacabka ku dilay duleedka Dhuusamareeb
Sh. Shaakir oo sheegay in la qabtay Raggii Shacabka ku dilay duleedka Dhuusamareeb
June 17, 2019 admin267
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo xalay warbaahinta Kula hadlay Xafiiskiisa magaalada Dhuusamareeb ayaa ka hadlay falal dil ah oo ka kala dhacay Deegaanada Galmudug kuwaas oo ay waxyeelo kasoo gaartay Dad Shacab ah oo Deegaan ahaan kasoo jeeda maamulka Koonfur galbeed.
Sheekh Shaakir ayaa waxaa uu Tacsi u diray eheladii dadkii lagu dilay dhamaanba deeganada Galmudug.
Sidoo kale waxa uu Sheegay in Laamaha amaanka ay gacanta kusoo dhigeen Dadkii ka danbeeyay Afartii qof ee lagu dilay deegaanka Dhiinwaris Duleedka Magaalada Dhuusamareb, laguna raad joogo isla Dadkii ka dambeeyay Falkii lagu xasuuqay dad shacab ah Magaalada Gaalkacyo.
Ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Shaakir ayaa kooxda Al-shabaab ku eedeeyay iska horkeenida bulshada wada dhalatay ee Soomaaliyeed waxa uuna ugu baaqay shacabka in ay u midoobaan ka hortagida dhagaraha Al-Shabaab.
Shirka dib u dhiska dalka oo ka furmaya Garoowe
Guddigi Xildhibaano oo loo xilsaaray Qiimeynta Dadkii lagu dilay Gaalkacyo
Hir-Shabeelle:Wasiirkii Saddexaad oo Iscasilay